kubva 1929 kuti Vatican yave yakazvimirira ehurumende uye gotwe munyika. Still, kuti kumboderedza kubwinya kwayo, runako, uye ayo zvikuru unokurudzira nemagariro uye wenhoroondo ukoshi. Kunyange zvakatevedzana pamusoro chete 0.44 sikweya makiromita, Vatican ine zvinokwezva zvakawanda zvekuchengetedza vashanyi vakabatikana: kubva St. Petro Basilica kuna Sistine Chapel (uye zvose zviri pakati), uchaita kuda ose yechipiri akapedza Vatican.
Kana toreva Kushanyira Vatican City Via njanji anoenda, pane ano yemagetsi chitima iripo vose Vatican iyi. Chitima chiri kubatanidza Vatican City chiteshi chechitima pamwe nePontifical Villas.
St. Peter's Basilica ndiyo inonyanya kuzivikanwa pakushanyira Vatican
Zvikuru St. KwaPetro Basilica ndiye centerpiece of Vatican, akavaka pane akafunga kuti apo St. Peter nzvimbo yekuviga.
Kuyevedza yazvo kodzero, ari Sistine Chapel chimwezve nzvimbo uchafarirwa. kuona kana iwe vari kushanyira Guta reVictoria nenjanji. Yakavakwa Pope Sixtus IV mu 1473-84 uye yakadzorerwa kubva 1980 kuti 1994, Sistine Chapel akabata Pamifananidzo kubudikidza vemifananidzo zhinji. Mazita Michelangelo, Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Rosselli, Ghirlandaio, uye Signorelli zvazvinoreva? tsime, Vakabatsira kuti madziro Sistine Chapel yepamusoro pakati Renaissance kupenda. Michelangelo Otonga Last kupendwa mukati Chapel anonzi kunoshamisa zvikuru uye chinokosha budiriro kuEurope unyanzvi.
Museo Pio Clementino paKushanyira Vatican
Vatican Museums inoratidza zvakarongeka kuronga kuratidzwa kwakagadzirwa naPapa Clement XIV naPius VI kubva 1769 kuti 1799. izvi namaberere ipfuma-yemashoko zvinokosha zvidimbu uye kusimbisa mashomanana zvakaoma chaizvo! Mumwe ane chinhu rakasiyana kupa:
Pope raMwari chirimo dzokugara, The Pontifical Villas – Barberini Gardens kwave akazaruka kuruzhinji kubva Kurume 2014. Mukova uri rudzi zvakaoma kuwana sezvo havana signposted. Iyo minda yenzvimbo ino yakanaka yapera 2000 zera, kunomeresa pamusoro matatu nhanho. Vane hunoshamisa uye tsime hunotaurwa, uye yokupedzisira pamwero rinoratidza zvisimbiso vanapapa siyana boxed mu nemakwenzi.
Kuti unakidzwe nekufamba kwako uchishanyira Guta reVictoria kuburikidza nechitima, Tsvaga kwawakabva uye sarudza Roma Kuponesa Train webhusaiti yekuverenga a chitima tikiti mukati maminitsi uye kutanga kwako Vatican mafaro nokukurumidza mungadai pane kutarisirwa!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fvisiting-vatican-rail%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)